द’लाल मार्फत् खोजेकी यौ’नकर्मी महिला आफ्नै श्रीमती परेपछि – Life Nepali
द’लाल मार्फत् खोजेकी यौ’नकर्मी महिला आफ्नै श्रीमती परेपछि
एजेन्सी , कहिलेकाहीँ श्रीमानश्रीमतीको भेट यस्तो अवस्थामा हुन्छ, कि त्यसभन्दा अगाडि अब के गर्ने ? कुनै बाटो रहँदैन। यस्तै एउटा घ’टना भारतको उत्तराखण्डस्थित काशीपुरमा भएको छ। भारतीय समाचार अनलाईन आज तकका अनुसार त्यहाँ एक व्यक्तिले आफ्नो यौ’नेच्छा पुरा गर्न क’लगर्ल (याै’नकर्मी) बोलाएका थिए। जब उनले बोलाएकी क’लगर्ल उनको अगाडि पुगिन् तब दुबै जनाको हो’सहवास उ’ड्यो। उनीहरु एकअर्काका श्रीमान श्रीमती थिए। खासमा ती श्रीमानले ह्वा’ट्सएपमार्फत एक द’लालसँग सम्पर्क गरेर क’लगर्ल पठाउन भनेका थिए।
दलालले पठाएकी क’लगर्ल आफ्नै श्रीमती परेपछि श्रीमान श्रीमतीबीच ठूलै वि’वाद र हा’तपात समेत भयो। दुवैले एक अर्कावि’रूद् प्रहरीमा उजुरी गरेका छन् । केही वर्ष पहिले दिनेशपुरका युवकको बिहे काशीपुरको आइटीआई क्षेत्रमा बस्ने युवतीसँग भएको थियो। तर, बिहेपछि नै श्रीमती श्रीमानसँग नबसेर माइतीमा बस्न थालेकी थिइन्। उनको धेरै समय माइतीमै बित्थ्यो, घरमा थाेरै समय मात्र बस्थिन्। एक दिन ती युवतीकी साथीले उनका श्रीमानलाई उनकी श्रीमतीले क’लगर्लको काम गर्ने गरेको बताइदिइन्। आफू हरुबीच झ’गडा परेको रि’समा उनले साथीका श्रीमानका अगाडि श्रीमतीकाे पो’ल खो’लिदिएकी थिइन्।
त्यसपछि श्रीमानले श्यामपुरमकी एक महिला द’लालसँग ह्वा’ट्सएपमा सम्पर्क गरेर क’लगर्ल पठाउन भने। द’लालले केही फोटो ब’ताएर युवती रो’ज्न भनिन्। युवकले आफ्नी श्रमतिको फोटो रोजे। महिला दलालको नम्बर उनलाई श्रीमतीकी साथीले नै दिएकी थिइन्। त्यस पछि जब क’लगर्लको रुपमा उनकै श्रीमती उनको अगाडि आइन्, उनीहरुबीच ठूलो ल’डाइँ भयो। अहिले श्रीमतीले आफ्ना श्रीमानको आफ्नी साथीसँग सम्बन्ध भएको आ’रोप लगाउँदै उ’जुरी गरेकी छिन् भने श्रीमानले श्रीमतीको यौ’नधन्दाको विषयलाई लिएर उ’जुरी गरेका छन्।
Previous अजय देवगनको जिन्दगी : ६० करोडको बंगलामा बसेर सय करोडको निजी जेट बिमान चड्छन”
Next अष्ट्रेलिया काण्डको नालिवेली , को हुन् ति युबती ? यस्तो छ वास्तविकता” !